2BR Unit @ Resort | I-Heated Pool, Ijimu, I-BBQ, Imidlalo
Hershey, Pennsylvania, i-United States
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-ResortShare5
I-Suites e-Hershey iyindawo yokuvakasha ongasoze wayikhohlwa. Ukungena kule ndawo emnandi (i-pun ehlosiwe) kuyajabulisa kuwo wonke amakhona futhi konke kugxile kweyodwa yezinkampani ezinkulu nezimnandi zaseMelika.
Amayunithi ahlotshiswe kahle futhi anefenisha enethezekile ezokwamukela ekhaya lakho kude nasekhaya. Lawa mayunithi ama-2 Bedroom anekhishi eligcwele onawo futhi ukuba lula kwe-washer / dryer kuyunithi kumane kwengeze ekunethezekeni kwakho kukonke.
Ukupaka okungakhokhelwa egalaji emagcekeni – isikhala esiyi-1
Bonisa wonke amasevisi angu- 64
4.94 ·17 okushiwo abanye
4.94 · 17 okushiwo abanye
Indawo ezungezile inezinto eziningi ezikhangayo ezihlanganisa iHershey Park edumile, iHershey's Chocolate World, kanye neZoo America North American Wildlife Park. Wena kanye nezivakashi zakho nizojabulela indawo emnandi futhi nizothola ukuqhuma!
Silwela ukwenza ukuhlela kwakho iholide futhi uhlale unolwazi oluhle futhi sikunikeze isevisi enhle yamakhasimende. Zizwe ukhululekile ukuthumela i-imeyili ku-ResortShare nganoma yimiphi imibuzo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hershey namaphethelo